Ha ku dhicin Khiyaanada "Jiritaanka Deegaanka" | Martech Zone
Telefoonkaygu maalintii oo dhan wuu dhacayaa. Marar badan waxaan shirar laqaadaa macaamiisha laakiin waqtiyada kale waxay fadhiyaan miiska miiska inta aan shaqada qabanayo. Markii uu taleefanka garaaco, waan fiiriyaa oo inta badan waxaa soo dhaca lambarka lambarka 317. Si kastaba ha noqotee, nambarka kuma jiro xiriirkeyga sidaa darteed ma arko qofka uu dhab ahaan ii soo waco. Iyadoo in ka badan 4,000 oo xiriir lala leeyahay taleefankayga - lagu waafajiyay LinkedIn iyo XariirPretty Aad ayaan u garanayaa qof kasta oo isoo waca
Laakiin tani way ka duwan tahay. Kani waa shirkad iib ah oo kabaxsan 317 lambarka aagga inaan isku dayo oo aan hagaajiyo fursadaha aan taleefanka ku qaato. Markii aan la hadlay Bill Johnson - macmiilkeenna, khabiir ku ah iibka dibadda, iyo aasaasaha Iibka, tan waxaa loo yaqaan joogitaanka deegaanka waana dawadii ugu dambeysay ee farsamada wicitaanka dibadda.
Halkan waxaa ah tusaale ka RingDNA:
Dhibaatada joogitaanka maxalliga ahi waa inay isla markiiba bilaabato isgacan qaadka u dhexeeya iibiye iyo rajo ka qabasho daacadnimo la'aan ah. Xilligan iyo xilligan, ee macaamiisha ay ka dalbanayaan shirkadaha in la helo hufnaan iyo daacadnimo dheeraad ah, tani waxay ku jirtaa khilaaf toos ah.
Joogitaanka deegaanka waa ku badan yahay kuna sii kordhaya warshadaha… sidoo kale waa khiyaano iyo doqonnimo aragtidayda Ma isku dayayo inaan ku garaaco RingDNA - waxay ka mid yihiin boqolaal waratada iibiya xalkan oo ah kii ugu horreeyay ee aan ka helo fiidiyoow Youtube. Laakiin inta fiidiyowga 'RingDNA' uu touts ka yahay tirada wicitaannada taleefannada ee la ajiibay ama la sooceliyay, ma bixinayo aragti ku saabsan dhaawaca soo gaadhay iibkaaga adoo adeegsanaya xeeladdan khiyaanada ah.
Doug Hansen, Maamulaha Guud ee Horumarinta Xisaabaadka noqda, ayadoon ogayn ayaa wicitaan ka soo qaatay iibiye hore u tabiyay kuwooda awooda-wicitaanka gudaha. Islamarkiiba wuxuu kafekeray sharafta iibiyaha inkasta oo uu horay u ogaa waxay samaynayaan.
Waxaan in ka badan 30 sano khibrad u leeyahay iibka, oo ay ka mid tahay raadinta taleefanka oo aan ku tijaabiyay farsamooyin badan oo kala duwan oo ku saabsan soo wicitaannada soo noqoshada ama soo qaadista qof kasta. Intaan fahmay soo jiidashada lambarada deegaanka si aan uga soo muuqdo aaladda soo wicitaanka rajada, waxaan ogahay in sidaas oo kale inta badan ay tilmaamayso rajada la marin habaabiyay ay soo qaadaan oo abuuraan carqalad diidmo ah oo u baahan in lagu jabiyo bilowga. In kasta oo farsamooyinkani wax ku ool u yihiin helitaanka rajada si dhakhso leh haddana waxay sidoo kale gudbinayaan inaan si hufan oo toos ah uga muuqanno qaabkeenna oo aan wiiqeyno waddada xiriirka aaminka ah.
Doug ayaa sifiican usheegay. Xitaa haddii heerka jawaabta uu kordho markaad wax ku garaaceyso isla lambarka aagga, ma qiyaasi karo inaad tahay heerka beddelaadku uu ku sii kordhayo. Sidoo kale ma rumaysan karo inaadan qatar galinaynin wareegga iibka oo dhan adoo ku bilaabaya lugta khiyaanada.
Kalsoonida iyo sugnaantu waa furaha iib kasta. Ha ku halista iyaga oo kharibaya furayaasha aagga!
Tags: lambarka aaggawacayajoogitaanka deegaankaiibinta dibaddaKordhinta Iibkataleefoon
Haa, kani waa mid ka mid ah khiyaanooyinkaas soo dhaafay taariikhda uu dhacayo. 18 bilood ka hor tani waxay igu khiyaanaysay labadii wicitaan ee ugu horreeyay, hadda wax kasta oo aan ku dhicin ID-ga wicitaanka waa la iska indhatiray…
In kasta oo tan hore loo arki karo inay tahay khiyaano, way adag tahay in la iska indhatiro heerka beddelka jawaabta ee kordhay isticmaalkiisuna aad ayuu u khuseeyaa inta lagu jiro duruufaha halka A. macmiilku uu codsaday wicitaan ama B. isticmaalaha ugu dambeeya uu yahay macaamil. Hadda, haddii aad wax ku iibineyso C-suite ama xisaabaadka shirkadaha, ha u isticmaalin joogitaanka maxalliga ah. Laakiin xagga kalsoonida, waxaan ku isticmaalay aaladdan boos hore (waagaas oo aan ka iibinayay macaamiisha) kalsoonidana WELIGII lama lumin. Had iyo jeer waa la kicin jiray - "Ma waxaad tihiin wiilal maxalli ah" taas oo aan uga sheegi lahaa nidaamkayaga taleefanka ee dareenka leh oo aan ku dhammayn doono weedha ah "quruxsan xariif sax ah?" Labadayaduba waan cuni lahayn oo waxaan ku sii wadaynaa wicitaanka iibka. Dhanka kale, heerka jawaabta ayaa ka kordhay 400% dalabkaas gaarka ah. 4x fursadaha lagu xidho ganacsiga. Waxaan qaadan doonaa caqabadahaas maalin kasta.
Waxaa jira dhowr istiraatiijiyad suuq-geyn ah oo suuq-geyn khiyaano leh oo hagaajinaya jawaabta iyo heerarka u-beddelashada nooc kasta, Ryan. Waad qaadaneysaa fursadaha, anigu ma ihi taageere mana aaminsani in shirkadaha wanaagsan ee waxsoosaarka iyo adeegyada waaweyn ay u baahan yihiin inay sidan wax ku qabtaan.
Oktoobar 6, 2015 at 2:15 PM
Miyaan tan loo tixgelin doonin xadgudub ku ah Xaqiiqda Sharciga Aqoonsiga Soo-wacaha ee 2009?
Oktoobar 6, 2015 at 11:23 PM
Anigu ma ihi qareen, laakiin ma aaminsani inay jiraan wax shuruudo sharci ah oo ku qasbaya lambar koodh inuu u dhigmo goobta dhabta ah ee qofka soo wacaya. Ka fikir qalabkaaga gacanta own Waxaan joogi karaa Las Vegas oo waxaan wici karaa qof "317" ayaa wali isdiiwan galin doona.